NTINYE ỤGBỌ MMIRI NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na kọntaktị dị na kọmpụta chere ihu na mberede nke usoro ahụ, na-ejikọta ya na ákwà na-acha anụnụ anụnụ na ozi na-enweghị nghọta. Nke a bụ ihe a na-akpọ "BSOD"na taa anyị ga-ekwu banyere ihe ọ bụ na otu esi emeso ya.
Dozie nsogbu ihuenyo na-acha anụnụ anụnụ
BSOD bụ nkwụsịtụ pụtara n'ụzọ nkịtị pụtara "ákwà ncha anwụrụ ọkụ". Ọ gaghị ekwe omume ikwupụta ya karịa, ebe ọ bụ na mgbe ihuenyo dị otú ahụ, ọrụ ọzọ na-enweghị nlọghachị agaghị ekwe omume. Tụkwasị na nke a, omume a nke usoro a na-egosi nrụrụ aka dị njọ na ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike nke PC. BSOD nwere ike ime ma n'oge mmalite kọmputa na n'oge ọrụ ya.
Hụkwa: Anyị na-ewepu ákwà nchacha anwụrụ ọkụ mgbe ị na-agbanye Windows 7
Mgbanwe nke njehie, nke a na-edezi na ákwà ncha anụnụ, ọtụtụ, anyị agaghị atụle nke ọ bụla. O zuru ezu ịmara na enwere ike ịkekọrịta ihe ha nwere na ngwanrọ na ngwaike. Nke mbụ bụ mmejọ na ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ dị na sistemụ arụmọrụ, na nke abụọ bụ nsogbu na RAM na draịva siri ike. Ntọala BIOS ezighi ezi, dịka voltages ma ọ bụ frequencies ezighi ezi n'oge overclocking, nwekwara ike ime ka a BSOD.
A na-akọwa ọtụtụ ikpe pụrụ iche na saịtị ahụ. bsodstop.ru. Iji rụọ ọrụ na enyemaka a, ọ dị gị mkpa ịghọta usoro usoro data nke usoro ahụ.
Nke kachasị mkpa bụ koodu njehie hexadecimal gosiri na nseta ihuenyo. A ghaghị ịchọ ozi a na saịtị ahụ.
N'ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na usoro ahụ na-agbanyeghị aka, ọ nweghịkwa ohere ịgụ ozi ahụ, mee ihe ndị a:
Pịa PCM na desktọọpụ na desktọọpụ ma gaa na njirimara nke usoro.
Gaa na mpaghara ndị ọzọ.
Na ngọngọ "Download ma weghachite" pịa bọtịnụ ahụ "Nhọrọ".
Chọpụta igbe dị n'akụkụ nrụghachị aka ma pịa Ok.
Ugbu a, mgbe BSOD na-egosi, a ga-emegharị redio ọzọ na usoro ntuziaka. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na usoro ahụ (njehie na-apụta n'oge buut) ị nwere ike ịtọ ntọala ndị ahụ na bọtịnụ bọtịnụ. Iji mee nke a, mgbe ịmalite PC, ị ghaghị ịpị F8 ma ọ bụ F1na mgbe ahụ F8ma ọ bụ Fn + f8. Na nchịkọta ị ga-ahọrọ iji gbanyụọ Malitegharịa ekwentị mgbe ịberede.
N'okpuru ebe a, anyị na-enye ndụmọdụ n'ozuzu banyere esi ewepụ BSODov. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha ga-ezu iji dozie nsogbu.
Ebumnuche 1: Ndị ọkwọ ụgbọala na mmemme
Ndị ọkwọ ụgbọala bụ isi ihe na-acha anụnụ anụnụ. Nke a nwere ike ịbụ ma ọ bụ ngwa ngwa maka ngwaike ma ọ bụ faịlụ tinyere na ngwanrọ ọ bụla. Ọ bụrụ na BSOD pụtara ozugbo ị wụnye ngwanrọ ahụ, ọ bụ naanị ụzọ ị ga-esi pụta bụ ịrụgharị "rollback" na ọnọdụ mbụ nke usoro ahụ.
Gụkwuo: Nhọrọ Nhọrọ Windows
Ọ bụrụ na enweghi ike ịnweta usoro ahụ, ọ dị mkpa iji ngwa ahụ ma ọ bụ mgbasa ozi nwere ike iji ụdị osụhọde nke os edere na ya, nke a na-arụ ugbu a na PC.
Gụkwuo: Otu esi emepụta ngwa USB USB nwere ike ịnweta na Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Iji bọọ si na windo mbanye, ị ga-ebu ụzọ hazie ọnụọgụ abụọ na BIOS.
Gụkwuo: Otu esi edozi bọl site na USB flash drive
Na nhazi nke abụọ nke nwụnye, họrọ "Nweghachi usoro".
Mgbe nyochachara, pịa "Na-esote".
Họrọ ihe egosiri na nseta ihuenyo.
Window nke uru bara uru ga-emepe, mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-eme omume ndị a kọwara na isiokwu ahụ nwere ike ịnweta site na njikọ dị n'elu.
Jiri nlezianya nyochaa usoro omume mgbe ị wụnye ihe omume na ọkwọ ụgbọala ma jiri aka gị mee ihe mgbake. Nke a ga - enyere aka ịmata ihe kpatara njehie ma wepụ ha. Imelite oge nke sistemụ arụmọrụ na otu ọkwọ ụgbọala ahụ nwekwara ike ịchekwa gị site na ọtụtụ nsogbu.
Esi melite sistemụ arụmọrụ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala na Windows
Software maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Ebumnuche 2: Ígwè
Nsogbu ngwaike nke na-akpata BSOD bụ ndị a:
Enweghị ohere ohere na usoro disk ma ọ bụ nkebi
Ịkwesịrị ịlele otú nchekwa dị maka ndekọ. A na-eme nke a site na ịpị aka na diski (nkewa) kwekọrọ na mgbanwe na Njirimara.
Ọ bụrụ na ezughị oke, nke ahụ bụ, ihe na-erughị 10%, ịkwesịrị wepu data na-enweghị isi, mmemme ndị a na-ejighị ma mee ka usoro ahụ dị ọcha.
Esi ewepụ kọmputa ahụ na kọmputa
Ichapu kọmputa gị site na ahịhịa site na iji CCleaner
Ọ bụrụ na ihuenyo acha anụnụ anwụrụ ga-eme mgbe ị jikọtara ihe ọhụrụ na nneboard, ị kwesịrị ịnwale imelite ndị ọkwọ ụgbọala ha (lee n'elu). N'ọnọdụ nke ọdịda, ị ga-ahapụ ịji ngwaọrụ ahụ n'ihi nrụrụ na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ nkwarụ nke njirimara.
Njehie na ndị ọjọọ na disk diski
Iji chọpụta nsogbu a, ị ga-enyocha niile draịva maka nsogbu, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, wepụ ha.
Ogwe ntụpọ "RAM" na-abụkarị ihe kpatara ọdịda. Ị nwere ike ịchọta modulu "ọjọọ" na MemTest86 +.
Gụkwuo: Otu esi anwale RAM na MemTest86 +
BSOD nwekwara ike ime ka mmiri nke components - ihe nhazi, kaadị vidiyo ma ọ bụ akụkụ nke motherboard. Iji kpochapụ nsogbu a, ọ dị mkpa ịchọta ọnọdụ okpomọkụ nke "ígwè" ma mee ihe iji dozie ya.
Gụkwuo: Anyị na-atụle okpomọkụ nke kọmputa ahụ
Ebumnuche 4: BIOS
Ntọala motherboard arụmọrụ (BIOS) na-ezighị ezi nwere ike iduga njehie usoro nchịkwa na-acha anụnụ anụnụ. Mkpebi kachasị mma na ọnọdụ a ga-edozi ọnụọgụ abụọ na ndị na-adịghị.
Gụkwuo: Tọgharia ntọala BIOS
Ebumnuche nke 3: Nje Virus na Antiviruses
Nje Virus ndị na-abanye na kọmputa gị nwere ike igbochi faịlụ ndị dị mkpa, gụnyere faịlụ usoro, ma gbochie ịrụ ọrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala. Ịchọta ma wepụ "pests" nwere ike iji scanners n'efu.
Gụkwuo: Otu esi ehichapụ kọmputa gị site na nje
Ọ bụrụ na agha virus egbochiwo ịnweta usoro ahụ, Kaspersky Rescue Disk, nke e dekọrọ na mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ, ga-enyere aka rụọ ọrụ a. A na-eme nchọpụta na nke a n'ejighi na-ejikwa usoro sistemụ arụ ọrụ.
Esi dee Kaspersky Rescue Disk 10 na ngwa USB USB
Mmemme nje antivirus nwekwara ike ịkpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị. Ha na-egbochi "faịlụ enyo" nke usoro ọrụ nke ọrụ maka ọrụ nkịtị nke ọrụ, ndị ọkwọ ụgbọala na, n'ihi ya, ngwongwo ngwaike. Ị nwere ike iwepụ nsogbu ahụ site na ịhapụ ma ọ bụ wepụ antivirus.
Ihuenyo Blue na-egosi na Windows 10
N'ihi eziokwu ahụ bụ ndị mmepe Microsoft na-agbalị igbochi mmekọrịta onye ọrụ na ihe onwunwe, ihe ọmụma nke BSODs na Windows 10 emewo ka ọ dị ntakịrị. Ugbu a anyị nwere ike ịgụ naanị aha njehie ahụ, ma ọ bụghị koodu ya na aha faịlụ ndị metụtara ya. Otú ọ dị, ngwá ọrụ gosipụtara na usoro ahụ iji chọpụta ma kpochapụ ihe na-akpata ihe nchacha anụnụ anụnụ.
Anyị na-aga "Ogwe njikwa"site n'ịkpọ ụdọ Gbaa ọsọ keyboard mkpirisi Nweta + R na ide iwu
Gbanwee iji gosipụta ọnọdụ "Obere ngosi " ma gaa na nchịkọta "Ụlọ Nche na Ọrụ Ntanetị".
Ọzọ, soro njikọ ahụ "Nchọpụta nsogbu".
Mepee oghere nwere ihe niile.
Họrọ otu ihe Ihuenyo Mmiri.
Ọ bụrụ na ịchọrọ idozi nsogbu ahụ ozugbo, wee pịa "Na-esote" ma soro ntuziaka ahụ "Nna ukwu".
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ozi gbasara njehie, pịa njikọ ahụ "Di elu".
Na windo na-esote, wepụ ya na nsochi ahụ "Tinye ihe nrụzi na-akpaghị aka" ma gaa chọọ.
Ngwaọrụ a ga-enyere aka inweta nkọwa zuru ezu gbasara BSOD ma mee ihe kwesịrị ekwesị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nkwụsị nke BSOD nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya ma na-ewe oge. Iji zere ọdịdị nke njehie ndị dị njọ, melite ndị ọkwọ ụgbọala na usoro ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, anaghị eji akụ ntanetị mee ihe iji budata mmemme, ekwela ka ihe dị iche iche gafee, ma gụọ ozi na saịtị ndị ọkachamara tupu ịmechaa.